Bịa ka Jizọs ọzọ | Apg29
Bịa ka Jizọs ọzọ
Ihe ị na-efu, ị nwere ike bulie ọzọ. Bịa ka Jizọs na-anọdụ ala na ụkwụ ya.
Mgbe ị malitere zọpụta na Chineke dịghachi ná mma, ọ bụ banyere na-eto eto mmekọrịta Jesus. The Christian ndụ abụghị ihe akpaghị aka ndụ. Ugboro ugboro, ọ bụ banyere na-Jesus, na-anọ na ya.
Mgbe Jizọs abịa n'ụwa, ị ga-ahụ ọzọ na ọzọ otú ndị mmadụ ndụ ha gbanwere. Ha na-gbaghara, gwọrọ, melite, nyeere na ume. Ma o were otu ihe ma na nke ahụ bụ na onye ahụ na ajụjụ wee Jesus. Na zutere Jizọs, ihe ọ bụla nwere ike ime. Ma, Jizọs adịghị ịchụ ndị mmadụ, ọ na-akpọ. Ọ na-ekwu - "Bịakwutenụ m".
Mgbe ị na-Jesus maka oge mbụ dị ka o reconciles ị na Chineke.
"O (Jesus) bụ ekpuchi mmehie ji baa àjà maka mmehie anyị, ma ọ bụghị naanị maka anyị kamakwa maka nke ụwa dum." 1 John. 2: 2
Tụgharịa na obi gị pụọ n'aka mmehie na-asị Jesus ka onwe gị gị mmehie na-enyemaka gị ka ị ghara ada maka ọnwụnwa nke mmehie. Iji na Chineke kpezie si otú a ọ bụghị naanị-ada n'ebe nwoke. Ọ bụ ihe na-abịa ka Jizọs, ka ihe mee na ya oku na-aga.
Ọ dịghị autopilot
Jesus arahụ ụra?
"Ma ọ nọ n'azụ ụgbọ ahụ, na-arahụ ụra na a ohiri isi. Ha kpọtere ya, sị ya: nna ukwu, adịghị ị na-eche na anyị na ịla n'iyi?" Mark. 4:38
N'otu ebe anyị gara Jizọs na-eso ụzọ ya n'ụgbọ mmiri. E a oké ifufe na ọdọ mmiri, ma Jizọs na-arahụ ụra n'ime ụgbọ. Na-ele ka ị kwụsịrị na kọntaktị na Jesus? Ọ hapụrụ gị. Ma eleghị anya, ọ bụ a bit gbụrụ nke gị ọzọ ma ọ bụ obere echefu ya. Mmekọrịta gị nwere ike "dara n'ụra"?
The ịhụnanya mbụ
"Ma m nwere a megide gị, na ị hapụwo gị ịhụnanya mbụ." Up. 2: 4
Ihe ị na-efu, ị nwere ike bulie ọzọ. Bịa ka Jizọs na-anọdụ ala na ụkwụ ya. Ka ọ bụghị ihe niile na-arụ ma ọ bụ nke ụwa a ọnwụnwa bata n'etiti gị na Jesus. Mụrụ ya nso nke obi ya na pounding otú ike gị. Ọ na-akpọ gị na chọrọ abughi ka ndụ ọnụ ọnụ ma ọ bụ ihe ndọghachi azụ ndị ga-egbochi ya.
Jizọs bụ ebube. Ọ bụ kwesịrị anyị niile isi na mgbe nile ịhụnanya na anya, n'ihi na ọ bụ onye ọ bụ. Bịa ka Jizọs.